Ndiyo nhamba yangu yekuchengetedzeka munharaunda uye maitiro ekuti uwane duplicate | Ehupfumi Zvemari
Iyo yekuchengetedzeka nhamba Rinogona kunge riri rimwe remagwaro akakosha atinofanira kuva tese, nekuti zvinowanzodiwa pakuita nzira dzakasiyana siyana. Kana iwe uchida kuziva yako chekuchengetedzwa kwevanhu munharaunda nhamba, Tevere isu tinokuudza iwe kuti ungazviwana sei kuti iwe ugone kuita chero rudzi rwemaitiro.
1 Chii chinonzi Social Security Number?
2 Ndiani anogona kuwana iyo yekuchengetedzeka nhamba?
3 Ndinoziva sei kuti yangu nhamba yekuchengetedzwa kwevanhu ndeyei?
4 Ndeipi iyo yekuchengetedzwa kwenhamba nhamba inogadziriswa?
5 Chii chandinoda kugadzirisa nhamba yangu yekuchengetedzwa kwevanhu?
6 Kugadziriswa kune yekuchengetedzeka nhamba
7 Dzokorora gwaro rekuchengetedzwa kwevanhu munharaunda
Chii chinonzi Social Security Number?
El Social Security nhamba, Iyo inozivikanwawo seyekuchengetedzeka kwenhamba yekubatana nhamba, iri nhamba yakasarudzika ine 9 manhamba uye inosungirwa kune vese vagari muSpain vari kufunga nezvekushanda. Zvimwechetezvo, vese vanhu avo vanobatsirwa nepenjeni kana, pazvinenge zvakakodzera, bhenefiti, zvakare vane chisungo chekuwana iyi yekuchengetedzeka kwenhamba.
Kuti uve wakananga, Pasina iyo yekuchengetedzeka nhamba, munhu haakwanise kuita chero rudzi rweyakabhadharwa basa chiitiko Uye kana ukadaro, unenge uchizviita zvisiri pamutemo. Kusava nenhamba iyi zvinoreva kuti mugari iyeye haana kubatana nesocial security system uye nekudaro haakwanise kuwana zvese mabhenefiti ayo anopa ino sisitimu.
Iyi nhamba inodikanwa kune vanhu kana vachitsvaga basa, pavanopedzisira vawana imwe kana kungoti pavanenge vachida kunyoresa neImployment Service.
Ndiani anogona kuwana iyo yekuchengetedzeka nhamba?
Vagari vese vanogara zviri pamutemo muSpain vanogona kuwana yekuchengetedzeka kwenhamba yekubatana nhamba. Mumakambani, vashandi vanogona kuwana gwaro iri sezvo zvichidikanwa kuti vaite chero basa ripi zvaro. Zvakare, iyi nhamba inogona kuwanikwa kuburikidza ne Mapurovhinzi Madhairekita eGeneral Treasure yeSocial Security kana kuburikidza nehutongi.
Izvo zvakakodzera kuti utaure kuti iyi yekuchengetedzeka nhamba haina kuwanikwa chete paunotanga kushanda. Vanhu vasina kumbobvira vapa kana vadiki, vanogona zvakare kuve ne chekuchengetedzwa kwevanhu munharaunda nhamba. Panguva iyo munhu akati anotanga chero chiitiko chebasa, iyo nhamba inova nhamba yekubatana iyo inosarudza kuiswa kwavo muhurongwa hwekuchengetedza vanhu.
Izvo zvakakosha kuti utaure kuti haugone kuve nemazhinji manhamba ekuchengetedzeka kwevanhu, kunyange chiri chokwadi kuti pane zviitiko izvo vanhu vane imwe yekuchengetedzwa kwenhamba nekuda kwekukanganisa kwekutonga. Kana chimwe chinhu chakadai chikaitika, zvinoitwa neSocial Security zvinobatanidza manhamba ese uye sarudza imwe chete seyakanyanya, kazhinji iyo iine kushandiswa kwazvino muchirongwa.
Izvo zvinofanirwa zvakare kujekeswa kuti iyo nhamba inoratidzwa pane kadhi rehutano haisi iyo yemagariro chengetedzo nhamba. Chii chinoitika ndechekuti iyo nhamba inoonekwa pakadhi inogadzirwa zvichienderana nenhamba yekuchengetedza vanhu. Ichi ndicho chikonzero nei nhamba dzichiwanzoenderana, zvakadaro pakadhi ravanoratidzwa mamwe manhamba ekuwedzera anoenderana nekodhi yepurovhinzi pakaitika kubatana nehurongwa, pamwe neyakaenzana nhamba.
Kana tsamba B ikaratidzirwa kuseri kweiyi nhevedzano pakadhi rehutano, zvinoreva kuti munhu wacho anogamuchira kurapwa semubatsiri, kusanganisira murume kana mukadzi asina mari kana vana vasingashande, kubva kumunhu ane mvumo yekuigamuchira zvakafanana. Chero ani zvake anogona kunyoresa kuti awane yekuchengetedzwa kwenhamba, uye zvakare zvinokwanisika kuzvinyoresa.
Kwete izvozvo chete, zvake social security system inokwanisa kudzima nhamba yakati kana zvikaonekwa kuti chakapihwa pasina kupihwa kodzero yacho.
Ndinoziva sei kuti yangu nhamba yekuchengetedzwa kwevanhu ndeyei?
Kuti uzive kuti yako yekuchengetedzeka nhamba ndeipi, unofanirwa kunge uri mukushanda, kana, kana zvichibvira, wakamboshanda. Kubva pane izvi uchave uine nzira dzinoverengeka dzekutarisa kuti yako yekuchengetedzeka yenhamba yekubatana nhamba ndeipi kuburikidza nekadhi rako rehutano, mubhadharo webhangi, pakati pevamwe.
Imwe yedzakareruka nzira dzekuziva yako yekuchengetedzeka nhamba ndeyekufonera vatengi kero yerunhare: 901502050 XNUMX XNUMX. Pane iyi nhamba, munhu anokushanyira achakupa purogiramu kuitira kuti iwe uende wakananga kuhofisi yekuchengetedzwa kwevanhu uye tora nhamba yako.
Zvino, kana iwe urikushandira parizvino, muhoro yako yekubhadhara iwe unogona zvakare kuwana iyo yekuchengetedzeka kwenhamba. Kazhinji unoiwana iri pamusoro pemubhadharo uye hazvina basa kana iri payroll yekare, nekuti nhamba yemagariro haichinje, inogara yakafanana.
Pamusoro pezvo, unogona kutsvaga yako yekuchengetedzeka nhamba pane zvekunyorwa, sezvo ruzivo urwu rwunoonekwawo ipapo. Zvibvumirano zvebasa zvakasainwa nekambani, iyi nhamba inoratidzwawo.
Iwe unogona zvakare kuziva kuti yako yemagariro chengetedzo yekubatana nhamba ndeipi nekuenda kune vekunze nzvimbo uye nekungokumbira iyo, asi kune izvi iwe unofanirwa kupa ID yako.
Iwe unogona zvakare kuenda kuSocial Security Treasure kuti utore ruzivo urwu, pamwe nekodhi yekadhi rehutano.
Mukuwedzera, the Iwe unogona zvakare kutsvaga yako yemagariro chengetedzo nhamba nekuwana iyo webhusaiti uye uchishandisa iyo "Duplicate Membership Gwaro" sevhisi, iyo nenzira inoitwa kuburikidza neSMS meseji meseji. Izvi kuitira kuti munhu anofarira akange ambopa General Treasury weSocial Security nenhamba mbozhanhare.
Kamwe chikumbiro chekodhi chikaitwa, munhu wacho anogamuchira meseji yeSMS, inozovatendera kuti vatore nhamba yekuchengetedzwa kwevanhu, voiprinta kana kungoiongorora.
Ndeipi iyo yekuchengetedzwa kwenhamba nhamba inogadziriswa?
Iye zvino zvatakakuratidza maitiro ekuziva yako yekuchengetedzeka nhamba, inguva yekutaura nezve kuti ungawana kupi yako yekuchengetedzeka nhamba. Kutanga, zvakakosha kuti iwe uzive kuti kana usati wamboshanda kare uye uchida kutanga kushanda, mune chero basa unozobvunzwa gwaro iri.
Chinhu chinowanzoitika ndechekuti iwe unofanirwa kuzadza chikumbiro chauchazopa pamberi pa Kutungamira kweGeneral Treasure yeSocial Security. Mune ino application iwe unofanirwa kudoma kero yekambani iyo iwe yaunoshuvira kushandira. Usakanganwa kuti zvese zvikumbiro zvekudyidzana kuchengetedzeka munharaunda zvinofanirwa kuitwa usati watanga kushanda.
Chii chandinoda kugadzirisa nhamba yangu yekuchengetedzwa kwevanhu?
Zvese zvikumbiro zvekunyoresa nechengetedzo yenzvimbo inofanirwa kunge iine ruzivo rwakanangana nekuita kwechiitiko chauchazoita. Mune ino pfungwa, iwe unobvunzwa kune inotevera ruzivo.
Zita kana zita rekambani rekambani inosimudzira kunyoreswa
Kambani Inopa Akaundi Kodhi
Iwe unofanirwa zvakare kudoma Social Security Scheme
Mazita ako uye mazita
Jobho kutanga zuva
Kugadziriswa kune yekuchengetedzeka nhamba
Dzimwe nguva zvakafanira kuita shanduko kune yekuchengetedzwa kwenhamba, mune iyo mamiriro iwe unofanirwa kuenda kuHurumende yeGeneral Treasure yeSocial Security inoenderana. Pamwe pamwe nekuratidzwa kweiyo DNI, ese magwaro anoratidza kudiwa kwekugadzirisa iyo social security nhamba inofanirawo kuunzwa.
Muchiitiko chekuti paine mubvunzo maererano ne kadhi rekuchengetedza hutano, saka zvinodikanwa kuti uende kunzvimbo yekutanga yekuchengetwa kana kiriniki yekurapa mune inoenderana Autonomous Nharaunda.
Dzokorora gwaro rekuchengetedzwa kwevanhu munharaunda
Iri ibasa rinopihwa neiyo yepamutemo portal yeHurumende yeGeneral Social Security Treasure uye iyo inobvumidza mapato anofarira, kwete chete kuti vawane, asiwo kudhinda kana, pazvinenge zvakakodzera, kubvunza pamhepo, zvakapetwa zvakapetwa zvechengetedzo yenhamba.
Izvo zvakakosha kuti uzive kuti sevhisi ino yakanangana chete kune avo vagari vatove nenhamba yekuchengetedzeka kwenhamba yakapihwa. Iyo sevhisi inokutendera iwe kuti uone nekukurumidza uye ubvunze zvakapetwa zvakapetwa zvechengetedzo yekudyidzana yenhamba yekubatana, inozivikanwa zvakare segwaro rekubatana.
Zvisinei nezvavanoshandisa, sevhisi inobvumidza mapato anofarira kurodha pasi iyi faira muPDF file fomati kana, pazvinenge zvakakodzera, ingoiprinta zvakananga kubva paInternet.
Gwaro iri rine ruzivo runotevera rwemunhu ari kurikumbira:
Dhata pane kuzivikanwa DNI kana NIE
Iyo yekuchengetedzwa kwenhamba nhamba, kana kana zviitiko zvebasa zvikaitwa izvo zvinokonzeresa kuumbwa mune yekuchengetedza chengetedzo sisitimu, huwandu hwekubatana nesocial security system.
Pamusoro peizvo zvataurwa pamusoro apa, sevhisi inoshanda chete kana zvasangana nezvinodiwa, pakati pazvo panotarisika sisitimu inoshanda, inogona kuve Windows, Linux neMac, mune avo vazvino vhezheni, mabhurawuza ewebhu akadai seMicrosoft Edge, Google Chrome, Firefox, pamwe neiyo Java 6 chaiyo muchina kana yepamusoro vhezheni.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » General hupfumi » Basa » Ndeipi nhamba yangu yekuchengetedzeka munharaunda uye maitiro ekuti uwane duplicate
Ivo vanogona kuratidza uko iyo SS nhamba inowanikwa MUKadhi rehutano, ndiyo yakapusa ...
Kubhadhara vs kubhadharisa